शुरुआती लागि microcontrollers प्रोग्रामिङ: सजिलो र किफायती
यसलाई थप र अधिक लोकप्रिय विद्युतीय डिजाइन विषय बन्दछ। हामी तपाईंको ध्यान गर्न भन्नेछु कि एउटा लेख प्रस्ताव के कार्यक्रम को लागि शुरुआती microcontrollers।
microcontrollers त्यहाँ के के हुन्?
सबै को पहिलो, तपाईंले microcontrollers संग अवस्था वर्णन गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले एक दृढ उत्पादित गर्दै छन्, तर धेरै तथ्यलाई, त्यसैले त्यहाँ विभिन्न सेटिङहरू जो विभिन्न microcontrollers, प्रयोग विभिन्न सुविधा र विभिन्न सम्भावनाहरू एकदम धेरै छ। तिनीहरूले प्रदर्शन गति, अतिरिक्त इन्टरफेस र नल को संख्या मा फरक। सबैभन्दा पूर्व सोभियत संघ भर लोकप्रिय प्रतिनिधिको RІS र AVR छन्। कार्यक्रम AVR र RІS सजिलो, आफ्नो लोकप्रियता सुनिश्चित जो छ।
microcontrollers प्रोग्राम रूपमा?
microcontrollers प्रोग्रामिङ सामान्यतया विशेष उपकरणहरू भनिन्छ प्रोग्रामर को मदद संग, बाहिर छ। प्रोग्रामर आत्म-गरे वा खरिद वा हुन सक्छ। तर microcontroller फर्मवेयर एक घर प्रोग्रामर मौका यो एक "ईटा" हुनेछ भनेर प्रयोग गर्दा, एकदम उच्च छ। तपाईं बोर्ड "Arduino" को उदाहरण विचार गर्न सक्ने थप एक विकल्प छ। बोर्ड Atmel गरेको एम सी मा चल्छ, र यो AVR microcontrollers प्रोग्रामिंग गरेको छ। बोर्ड पहिले नै पूर्व-सिले bootloader र USB पोर्ट असक्षम सबै भन्दा राम्रो एम सी हुन सक्छ कि डेटा प्रयोगकर्ता पहुँच दिएर सुरक्षित प्रयोग फ्लैश microcontroller अनुमतिको छ। शुरुआती लागि microcontrollers प्रोग्रामिङ यसलाई लाग्न सक्छ रूपमा गाह्रो छैन, र एक निश्चित कौशल र कौशल मा नयाँ संयन्त्र लागि जाने भएको तपाईं बचत हुनेछ।
विभिन्न microcontrollers को हार्डवेयर मतभेद
एक microcontroller केही हार्डवेयर मतभेद ध्यान गर्नुपर्छ छनौट गर्दा छैन पनि फरक कम्पनीहरु छन्, र त्यही मोडेल दायरामा। को microcontroller मा डाटा अधिलेखन गर्न सक्ने क्षमता ध्यान सुरु गर्न। यो सुविधाले तपाईंलाई एक लामो एम सी संग परीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ। पनि आफ्नो गन्तव्यमा पिन को संख्या ध्यान दिनुहोस्। त्याग्ने छैन, र योजना चलिरहेको छ कि क्रिस्टल को आवृत्ति: यो जो एक microcontroller प्रदर्शन गर्न सक्छन् प्रति सेकेन्ड सञ्चालन संख्या, असर गर्छ। यी विशेषताहरु को परीक्षा, साथै स्मृति मा आईसी सुरुमा कि केही बौद्धिक microcontroller गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो एउटा misconception छ। शुरुआती सुरुमा सबै भन्दा राम्रो उपकरण आवश्यक लागि, तर एक आरक्षित रूपमा, र तपाईं अधिक शक्तिशाली केहि लाग्न सक्छ कि कार्यक्रम microcontrollers सम्झना।
कार्यक्रम microcontrollers को भाषा
को microcontroller दुई कार्यक्रम भाषाहरू रूपमा प्रयोग गरिन्छ: सी / सी ++ र कोडांतरक। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको फाइदा र बेफाइदा छ। त्यसैले, हामी कोडांतरक कुरा भने, यो सम्भव धेरै सूक्ष्मता र सही सबै गर्न बनाउँछ, तपाईं पर्याप्त राम वा परिचालन क्षमता (जो, प्रसंगवश, एकदम दुर्लभ छ) नभएको बेला यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। तर यो कार्यक्रम मा आफ्नो अनुसन्धान र लेखन प्रयास, समय र समयबद्धता को धेरै चाहिन्छ। तसर्थ, विकास लागि microcontrollers सामान्यतः प्रयोग कार्यक्रम भाषाहरू सी र सी ++ आधारमा। तिनीहरूले पूर्ण अर्थमा उनको प्रतिनिधित्व छैन हुनत राम्रो फारम र संरचना द्वारा, बुझे छन् नजिक मानव बोली छन्। तिनीहरूले पनि यो कार्यक्रम को बस एक तत्व हो भनेर कल्पना, सजिलै हार्डवेयर अन्तरक्रिया गर्न सक्ने धेरै राम्रो-अनुसन्धान सुविधाहरू छन्। सी र सी ++ मा सबै यसको स्पष्ट लाभ को लागि, एक थप तीन-आयामी कार्यक्रम, भन्दा विधानसभा भाषा सिर्जना गर्नुहोस्।
साथै, केही उदाहरणहरू मा, महत्वपूर्ण सञ्चालन ठाउँ प्रयोग गर्दा, यो सम्भव यी भाषाहरू संयोजन छ। लगभग सबै सी र सी को लागि विकास वातावरण को ++ कोडांतरक आवेषण मा कार्यक्रम स्थापना गर्न सक्ने क्षमता छ। तसर्थ, एउटा समस्या कोडांतरक सम्मिलित लेख्न र microcontroller लागि फर्मवेयर र फर्मवेयर नै, वा यसलाई एकीकृत गर्न सक्छन् एक महत्वपूर्ण साइट मा हुन्छ भने बरु, यो भन्दा सी वा सी मा लेख्न ++। सी मा microcontroller कार्यक्रम धेरै मानिसहरू यी भाषा रोज्न, सजिलो छ। तर अफ्ठ्यारो डराउँछन् र काम उपकरण को peculiarity बुझ्न चाहने ती, आफ्नो हात प्रयास र कोडांतरक संग गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ microcontrollers संग परीक्षण गर्ने इच्छा थियो भने, यो ठीक छ। हामी धैर्य र लगनशील भई लागिरहेमा मात्र सल्लाह गर्न सक्छन्, र त्यसपछि सबै आविष्कारक अघि सेट लक्ष्य, सम्भाव्य हुनेछ। शुरुआती र अनुभवी मान्छे को लागि microcontrollers प्रोग्रामिङ फरक देखिन्छ: यो शुरुआती, अनुभवी लागि गाह्रो छ - दिनचर्या। मुख्य कुरा - मनमा राख्न छ भन्ने होइन भौतिक को व्यवस्था विपरीत सबै, सम्भाव्य र निर्णायक हुन्छ।
रिग्रेसनपरीक्षणप्रक्रियापजगर्नुहोस् सफ्टवेयर। रिग्रेसनपरीक्षणप्रक्रियापजगर्नुहोस् के हो
कम्प्युटर खेल सिद्ध विश्व: सिस्टम आवश्यकताहरु
एक गतिशील एरे र यसको सुविधाहरू
Java Generics: विवरण र विधिहरू
कसरी आफ्नै कार्यक्रम प्रोग्रामिंग सुरु गर्न
HTML-पृष्ठ - छापा संस्करण
स्तन - समीक्षा र सिफारिसहरू
सामाजिक प्रविधि: परिभाषा, प्रकार, intsrumentary
लोक उपचार को पाइलोरी उपचार - दबाइ उपचार को सफलता साथै